Ny metro ao Izmir, mitondra mpandeha 500 Ariary isan'andro, 20 taona antitra | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACôte d'Ivoire Tiorka35 IzmirIzmir Metro, izay mitondra mpandeha 500 arivo isan'andro, dia 20 taona
22 / 05 / 2020 35 Izmir, Railway, Côte d'Ivoire Tiorka, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Metro, TORKIA
Izmir Metro, izay mitondra mpandeha arivo isan'andro
Metro, latsaka velona ny fitateram-bahoaka any Izmir, 20 taona. Ny rafi-pitantanan'ny Metropolitan Munisipaly dia manakaiky ny antsasa-tapitrisa tapitrisa mpandeha isan'andro miaraka amin'ireo tsipika miady.
Ny Izmir Metro izay nanomboka niasa tao Izmir tamin'ny 22 mey 2000 dia nandalo 20 taona. Ny ben'ny tanàna Metropolitan Tunç Soyer, izay nitsidika ny tolotra Halkapınar tamin'ity andron'i Izmir Metro ity dia nankalaza ny fialantsasatry ny mpiasa tamin'ny alàlan'ny radio. Raha niresaka teto dia nilaza ny filoha Soyer fa İzmir Metro dia iray amin'ny reharehan'ny tanàna. Ny filazan'izy ireo fa ny singa izay mitazona ny andrim-panjakana dia ny mpiasa mamokatra tolotra, dia nanohy i Soyer: "Noho izany, fahasalamana ho anareo rehetra. Ity fandalinana ity dia eo amin'ny dingan'ny krizy corona eran'izao tontolo izao, indrindra ao Izmir nandeha niaraka nanasongadina fanadihadiana tany Torkia. Amin'ny Izmir Metropolitan monisipalintsika, samy manana ny zava-bitany ny tarika tsirairay ananantsika. Ny sasany manantona sakana, ny sasany manadio lalana, ny sasany mampiasa tram. Fa rehefa miaraka izany rehetra izany dia nambara ny fahatsapan-kevitr'i İzmir Metropolitan Munich. Ary tiako ny milaza fa notohizanay tsara izany fomba fijery izany. ”
Tanànan'i Izmir, tanànan'i Izmir, ny filoha nahomby indrindra any Tiorkia dia nanamarika fa iray tamin'ny Soyer, dia nanohy izy hoe: "Mila fantatro. Miarahaba antsika rehetra izay nandray anjara manokana. Fahasalamana ho an'ny asa rehetra ataonao. Mirehareha aminao izahay. Rehefa manomboka miaina ara-dalàna ny fiainana, dia manantena aho fa hanompo hatrany amin'ny fomba tsara indrindra izahay rehetra. ”
Nandritra ny fitsidihany ny Ben'ny tanàna Soyer, Sekretera jeneralin'ny Kaominin'i Metropolitan, Dr. Buğra Gökçe sy i Sönmez Alev, ny tale jeneralin'ny Izmir Metro.
Voaroaka tsirairay izy ireo isaky ny avy
Izmir Metro sy Izmir Tram dia manohy miasa amin'ny fizotran'aretina. Ao anatin'ny saran'ny fepetra fiarovana fanampiny mandritra ny fizotry ny areti-mifindra, dia atao isan'andro ny disinpikan'ny fiara feno. Averina indray, ny tohivoho fanodinkodinana dia mitohy miverina tsindraindray eny amin'ny toeram-piantsonana rehetra ary mijanona. Ny fanadiovana anatiny ny fiara, izay manadio avy hatrany amin'ny fanasana borosy, dia mampiasa fitaovana fanadiovana tsy misy fofona izay tsy manimba ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny tontolo iainana ary ny fitaovana amin'ny sarety. Omena fiofanana amin'ny fiara ny fiara rehetra rehefa avy mandalo amin'ireo fizotra ireo sy ny fisavana azy ireo. Ireo fiara izay voadio sy manadio, rehefa vita isaky ny vanim-potoana mandritra ny fandidiana dia atolotra ny serivisy mponin'ny Izmir. Manome serivisy amin'ny teny filamatra hoe "Efa niandry 20 taona izahay, tsy miandry", ny mpiasa rehetra avy amin'ny mpamily mankany amin'ny mpiasa fanadiovana dia miasa 7/24 ho an'ny serivisy milamina, salama, ara-potoana ary ara-pahadiovana.
Nanomboka tamin'ny tsipika 11, 5 kilometatra
Izmir Metro, izay nanomboka 20 taona lasa izay miaraka amin'ny halavan'ny lalana 10 kilometatra izay misy ny fiantsonana 11.5, Konak ary ankehitriny Karşıyaka Miaraka amin'ireo tohatra, dia mitondra mpandeha 41 500 eo ho eo isan'andro izy, na dia amin'ny kilometatra 24 kilometatra aza. Izmir Metro sy Izmir Tram dia mivory 2000 isan-jaton'ny fitateram-bahoaka ao an-tanàna. Izmir Metro, izay nanomboka niasa tamin'ny fiara 45 tamin'ny 220, dia fiara vaventy miisa 20 miaraka amin'ny fampidirana fiara metro vaovao sy fiara tram tamin'ny fotoana taloha. Nandritra ny 8 taona lasa, mpandeha 1 1 tapitrisa ariary no nampandehina, nifanaraka tamin'ny 164 36 tamin'ny 903 mponina eran'izao tontolo izao. Ny totalin'ny dia XNUMX tapitrisa kilometatra natao tamin'ny andro voalohany dia mitovy amin'ny fandehanana manerana an'izao tontolo izao XNUMX.
Mpandeha 365 arivo isan’andro manomboka eo Marmaray, 15 arivo isan’andro manomboka ny 156 Jolay Martyrs Bridge
Baskentray dia hitondra mpandeha 500 arivo isan'andro
Bursa Tram Line Mitarika 7 An'arivony ny andro iray dia manitatra mankany amin'ny làlana Yalova
Fiara fitaterana 500 nipoitra tamin'ny lanezy any Amerika
Kadıköy-Kartal metro dia mitondra mpandeha 700 arivo isan’andro
Keçiören Subway dia hitondra mpandeha 50 arivo isan'andro
Istanbul sy Ankara Subway ho an'ny mpandeha an'arivony 60 10 mitondra olona an'arivony
15 Olona an'arivony no tonga any amin'ny Centre Ski Centre Erciyes
Marmaray, izay mitsangatsangana olona 500 tapitrisa isan'andro, no manadio amin'ny loha ka hatrany amin'ny tongotra isan'andro
Ny mpandeha 20 arivo 720 dia nifindra andro iray tao Akçaray
Ropeway 3 Day 27 An'arivony ny mpandeha 474 no nitatitra
TCDD lasibatra hitondra entana 50 arivo isan'andro
Tranom-bokatra Tranom-bokatra 8 50 Nandany arivo teo ho eo ny mpandeha
Izmit Tram dia hitondra mpandeha 16 arivo isan'andro
Ny fiarandalambon'i Gaziantep dia mitondra mpandeha 60 arivo isan'andro
10 tapitrisa 500 8 metatra toradroa sy korana 200 tapitrisa XNUMX XNUMX Bursa
Ireo mpandeha an'arivony 120 dia halefa any Gaziantep miaraka amin'ny rafitra fantsom-pitaterana roa
Üsküdar-Çekmeköy Metro Line 179 An'arivony ny mpandeha 612 no nitarika ny andro voalohany
89 An'arivony 407 no nafindra tany Kocaeli
Karşıyaka 30 Mitondra mpandeha an'arivony isan'andro